Global Voices teny Malagasy » Pakistan: Fahafatesan’i Bhutto sy ny fiantraikan’izany eo amin’ny fifidianana · Global Voices teny Malagasy » Print
Pakistan: Fahafatesan'i Bhutto sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fifidianana
Voadika ny 17 Oktobra 2018 3:19 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Mbola ao anatin'ny dona, The Emergency Times , izay manara-maso akaiky ny fivoaran'ny toe-draharaha ara-politika ao Pakistana, manoratra hoe:
Amin'izao fotoana mampalahelo eo amin'ny tantaran'i Pakistana izao, tohina tsy mahita lazaina izahay ato amin'ny Emergency Times manoloana ity fihetsika vono olona tsy misy fandeferana sy feno herisetra nihatra tamin'ny mpitarika malaza indrindra (angamba) ao amin'ny firenentsika. Tsy misy teny ampy hanamelohana ity fihetsika feno habibiana ity, izay mety hitarika fahafatesana sy fandringanana bebe kokoa ho an'ity tany nampijaliana ity. Hamela hantsana goavana ao amin'ny fitantanana ny firenentsika ny fahafatesany. Ny hany antenaina, ankoatra ny fanantenana, dia hoentina eo anatrehan'ny fitsarana ireo nahavanon-doza
Pickled Politics  manome rohy mankany amin'ny vaovao ary mpaneho hevitra iray manoratra hoe “Ny famonoana ireo olo-malaza ara-politika dia marika ratsy ho an'ny fiarahamonina, satria manaporofo mazava ny tsy fahampian'ny fahatokisana sy ny fanajana ireo andrim-panjakana sy ny fiarahamonina izany. Ny hany fanantenana dia hoentina eo anatrehan'ny fitsarana ireo mpanao heloka bevava.
Nisy fomba fijery hafa koa nipoitra, mijery an'i Bhutto ho mety ho mpitarika sy mpiantsehatra amin'ny politika iraisam-pirenena. Counter Terrorism Blog  nilaza hoe:
Izy dia olona mety afaka miaraka miasa amin'i Etazonia mba hitady lalana ho an'i Pakistana manoloana ireo fanamby lalina nateraky ny tsy fandeferana ara-pinoana sy ny extremisma ara-politika, ny fivarotana zava-mahadomelina, ireo andrim-panjakana izay tsy manome tolotra ilaina any amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, ary ny fifandraisana mikorontana eo amin”i Pakistana sy ireo mpifanolo-bodirindrina akaiky azy – Afganistana, India ary Iran.
Lalina ihany koa fahadisoana nataony, araka ny fanamarinana momba ireo tranga kolikoly goavana hanenjehana azy sy ny vadiny ary voarakitra tsara. Tena nitondra ny fireneny toy ny orinasam-pianakaviana tokoa izy, ary nahitana vokatra mahatsiravina. Anisan'izany ny fanesorana azy teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 1990 sy tamin'ny taona 1996 raha namparefo ny politikany ny kolikoly ary nandray anjara mavitrika tamin'ny tsy fahafahany nanome ny fanavaozana ilaina mba hahatonga ny governemantan'i Pakistana hihaino ny filàn'ny vahoakany.
The Moderate Voice  kosa manana tantara fohy momba an'i Benazir Bhutto, anisan'izany ny vaovao momba ny rainy izay efa Praiministra tao Pakistana ihany koa, ary voaheloka ho faty tamin'ny taona 70 noho ny fiampangana mitovy amin'izay natrehan'i Benazir taty aoriana.
Avy amin'ny sisintany, Indian Muslims  maneho hevitra momba ny famonoana, ary miady hevitra momba ireo teorian'ny teti-dratsy samihafa.
Tsy azo tsinontsinoavina tanteraka ny tànan'i Nawaz Sharif satria manana ny anton'ny fanesorana azy koa izy: Izy irery no hany mpitarika ny firenena manana traikefa amin'ny maha-praiminisitra. Azony antoka izao ny fifehezana amin'ny maha-praiminisitra ao Pakistana. Mety ho tsy misy izany teti-dratsy ity saingy tsy fantatrao velively ny amin'ireo mpanao politika mpanararaotra sy tia tena
Mandritra izany fotoana izany, nahazo fanehoan-kevitra an-jatony ny lahatsoratr'i Sepia Mutiny  momba ny fahafatesan'i Bhutto. Hoy ny mpitsikera iray
Misy ny manontany tena raha tena nahatsapa voaaro izy tany Pakistana. Ny fitiavana ny firenena sy ny faniriana handray anjara, misy ahiahy tamin'ny fandraisana fahasahiana nidirany ve? Ambaratongam-pahadisoam-pijery ho maritiora, na dia nalevina impito mandifotra olona aza? Azontsika sary an-tsaina ve ny manokan-tena ho an'ny fotokevitra ara-politika ka lasa sahisahy foana eo amin'ny fiainantsika? Sarobidy ve izany, Benazir?
Tena mampalahelo. Ho aiza i Pakistan?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/17/127471/
 The Emergency Times: http://pakistanmartiallaw.blogspot.com/2007/12/benazir-bhutto-assasinated.html
 Pickled Politics: http://www.pickledpolitics.com/archives/1618
 Counter Terrorism Blog: http://counterterrorismblog.org/2007/12/assessing_benazir_bhuttos_assa.php
 The Moderate Voice: http://themoderatevoice.com/politics/foreign/benazir-bhutto/16705/benazir-bhutto-gunned-down/
 Indian Muslims: http://indianmuslims.in/pakistan-to-najistan/
 Sepia Mutiny: http://www.sepiamutiny.com/sepia/archives/004925.html#more